Sakura-Myanmar: သမီးဖတ်ဖို့ (၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်-ဇူလိုင်လ)
Posted by nu-san at 10:02 AM
ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ဆင်ဆင်တစ်ယောက်တော့ အလုပ်ရှုပ်တော့မှာပဲ။ သူလဲ..ရေးဖို့စိတ်ကူးရလာရင်အကောင်းသား။
သမီးလေးကြီးလာတော့လဲ ဖတ်ပြလို့ရတာပေါ့...း))
ဖတ်သွားတယ် အစ်မရေ ဟိဟိ ကိုယ့်အရာမဟုတ်တော့ ဘာမှပြောခဲ့တော့ဘူး ဟို ကိုဝင်းကြည် နဲ့ အစ်မကြီးရေ ဒါမျိုးလေးတွေ နုတ်ရေးထား နောက်ဆို ရေးလို့ရအောင်း)
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မြန်မာပြည်မှာ မှတ်ပုံတင်လုပ်တုန်းက B သွေးတဲ့။ဒီရောက်လို့ KK မှာသွေးလှူမယ်လုပ်တော့ သူက form မှာ B လို့ဖြည့်တယ်။လှူခါနီး သွေးကို သေချာအောင် ဆေးရုံကထပ်စစ်တော့ O+ စြေ်နေတယ်။:)
ကျွန်တော်လဲ မှတ်ပုံတင်လုပ်တုန်းက စစ်ထားတာ အေသွေး။ လွန်ခဲ့ တဲ့ ၎ နှစ်လောက်ကမှ ညီမလေးက အဖေက အိုသွေး အမေက ဘီသွေးကို နင်ကဘာဖြစ်လို့ အေသွေးဖြစ်နေရတာလဲ ဆေးရုံမှာကလေးမှားလာလို့ ဘဲဖြစ်ရမယ်ပြောလို့ ။ သွေးပြန်သွားစစ်ရတယ် အဖြေစောင့်ရင်း ရင်တွေတောင်တုန်လို့ မတော်လို့ ရုပ်ရှင်ထဲကလို မွေးစားသမီးဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ....:)
သမီးဖတ်ဖို့ ဆိုပေမယ့်. တို့လည်း ဖတ်သွားတယ်. :)
အခုမှ ရောက်ဖူပါတယ်။ Kagoshima မှာရွှေတိဂုံပုံတူ စေတီရှိတယ်ဆိုတာ ကြားဖူးတာနဲ့ အဲဒီအကြောင်းရှာရင်း လာလည်ဖြစ်ပါတယ်။ ခိတကျူးရှူးက ဘုရားအကြောင်းလည်း ကျနော်က ခရီးသွားမှတ်တမ်းသဘော ရေးထားဖူးပေမဲ့ အစ်မ ဖော်ပြထားသလိုတော့ မပြည့်စုံပါဘူး။
မနုစံ မင်္ဂလာပါ၊ အမလည်း သမီးလေးမွေးလာတော့ အလုပ်တွေရှုပ်နေမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်၊ အမကစာတွေကဘယ်လိုရေးရေး ဖတ်လို့ကောင်းတယ်၊ သမီးဖတ်ဖို့စာတွေကို ၀င်ဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းတရားကို အမဆီမှာ တွေ့လိုက်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
အမတို့မိသားစုလေး ကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်နုလုံး ချမ်းမြေ့အေးပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်။
ကိုဝင်းကြည်နဲ့ ဆင်ဆင် လာဖတ်သွားပါတယ်
စာလာဖတ်သွားပါတယ်.. link ချိတ်ခွင့်ပြုပါနော် :)
mm>> ဆင်ဆင်က စာရေးကောင်းတော့ သူလည်း ရေးမှတ်ထားမှာပါ။ :)
မမသက်ဝေ>> ဟုတ် မ.. သူကြီးလာရင် ဒီစာတွေ ဖတ်ဖို့အတွက် သူ့ကို မြန်မာစာ ဖတ်တတ်အောင် အရင်လုပ်ပေးဦးမယ် အမ။ :)
မောင်မျိုး>> ရပါတယ် မောင်မျိုးရေ၊ ဘာမှ မရေးလည်း အမ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ စာလာဖတ်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်။ :) ကိုဝင်းကြည်နဲ့ ဘယ်သူလဲဟင်??? :O ဆင်ဆင့်ကို ပြောတာလား။ အမကို ပဟေဋ္ဌိ ဖွက်သွားပြန်ပြီ။ :D
JuneOne>> ဒါဆို အမ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ အဲဒါ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ မသိဘူး။ အမလိုပဲ ကိုယ့်သွေးအမျိုးအစားကို အမှတ်မှားနေတာ လူဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များ ရှိပြီလဲ မသိဘူး။ သိထားသင့်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သွေးအမျိုးအစား ပြန်စစ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ :)
Home Sweet Home>> အင်းနော်။ အမလည်း အဲဒီလိုဖြစ်နေတာလေ။ နေရင်းထိုင်ရင်း သွေးအမျိုးအစားတလွဲဖြစ်နေတော့ ကိုယ်ကပဲ မွေးစားထားခံရသလိုလိုနဲ့ :D
သိင်္ဂါကျော်>> ရပါတယ် လာဖတ်ပါ။:)
Shinlay>> ဟုတ် မ။ သူတန်ဖိုးထားတတ်ပါစေလို့ပဲ ပြောရမှာပဲ အမရယ်။ :)
Kyaw Hnin Se Lwin>> အဟုတ်ပဲ ညီမရေ။ သူ တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာလေ အမေက အားချိန် မရှိလေပဲ။ ကွန်ပျူတာ သုံးတာ၊ အိမ်အလုပ်လုပ်တာ အဲဒါတွေအတွက် သူ့အိပ်ချိန်ကိုပဲ ချောင်းနေရတယ်။ သူအိပ်မှ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ရတယ်။ :)
meengelay>> အမလည်း ရေးထားတာ ကြာပြီဆိုတော့ ညီမပြောမှ ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း စာရေးဆရာ သူရိန်ထက်ရဲ့ ဆောင်းပါး ဖတ်ထားမိလို့ သတိရတာနဲ့ ထည့်ရေးလိုက်တာပါ။ အမက သူများရေးထားတာလေးကို ဆက်စပ်မိအောင် ကိုယ့် ပို့စ်မှာ ယူသုံးထားတာပါ။ :)
ကမာနီလာ>> ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုကမာ။ အလုပ်ရှုတ်တာကိုတော့ ထူးပြီး မညည်းချင်တော့ပါဘူး။ သမီးလေးအတွက် ရေးထားတာလေးတွေကို လာဖတ်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကိုကမာလည်း အချိန်ရရင် စာရေးပါဦး။ အသစ်တွေလည်း မျှော်နေပါတယ်။ :)
:P>> ဆင်ဆင်က ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီ nickname လေး ဖြစ်သွားတာလဲ။ ဆင်ဆင် ဘယ်တော့ due date လဲ။ စပ်စုတာ.. :P
ဟန်နာ>> link ပါ ညီမ။